picosecond laser igwe Manufacturers na suppliers - China picosecond laser igwe Factory
755nm 1064nm 532nm Laser Freckle Removal Machine, Sistemu Mwepụ Tattoo
PicoSecond Laser na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ n'ogologo) wee were nnukwu nrụgide kụọ melanin, melanin na-agbajikwa n'ime obere irighiri uzuzu. N'ihi na ụmụ irighiri ihe ndị ahụ pere mpe, ahụ na -etinye ha ngwa ngwa ma wepụ ha. Ọ bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na-adịghị emerụ ahụ maka akpụkpọ ahụ.
Igwe Mwepụ Pigmentation Pico Azụmaahịa 2-10mm nha nha nha
Igwe mwepụ Tatos Picosure, Ngwa mwepụ egbugbu laser na -egbu mgbu
PicoSecond Laser na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ na lenath) wee jiri nnukwu nrụgide kụọ melanin wee hapụ melanin ka ọ gbawaa n'ime irighiri ihe dị ka uzuzu. N'ihi na ụmụ irighiri ihe ndị ahụ pere mpe. ha na -amịkọrọ ha ngwa ngwa ma kpochapụ ha. Ọ bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na-adịghị emerụ ahụ laser akpụkpọ anụ ahụ.
Ọkachamara 1064nm/532nm Laser Pigmentation Removal Machine Ultra Short Pulses
Picosure Q Gbanwee Nd Yag Laser Pigmentation Removal Machine Maka Iwepụ Afọ
Igwe Mwepụ Pig Laser Pico na -adịgide adịgide Maka Ọgwụ Chloasma / Sunburn
Laser Picosecond na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ na lenath) were nnukwu nrụgide kụọ melanin wee hapụ melanin ka ọ gbawaa n'ime irighiri ihe dị ka uzuzu. N'ihi na ụmụ irighiri ihe ndị ahụ pere mpe. ha na -amịkọrọ ha ngwa ngwa ma kpochapụ ha. Ọ bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na-adịghị emerụ ahụ laser akpụkpọ anụ ahụ.
755nm 1064/532nm Laser Pigmentation Removal Machine 2-10mm nha nha nha.
PicoSecond Laser na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ na lenath) wee were nnukwu ihe kụọ melanin.
nrụgide ma hapụ melanin ka ọ gbawaa n'ime obere irighiri ihe dị ka uzuzu. N'ihi na ụmụ irighiri ihe ndị ahụ pere mpe. ha dị ọtụtụ
ahụ dị mfe itinye obi gị dum ma kpochapụ ya. Ọ bụ ịwa ahụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na-adịghị emerụ ahụ akpụkpọ anụ laser
Akụrụngwa Mwepụ Akpụkpọ anụ Pigmentation Picosure Laser Machine OEM/ODM
Igwe mwepụ laser ihe mgbu na -enweghị ihe mgbu, igwe na -ewepu egbugbu egbugbu
Sistemu Eraser Igwe Igwe Igwe Ọkụ Laser Azụmaahịa Maka Salon
Igwe mwepụ egbugbu egbugbu Laser Picosecond dị elu 600ps Pulse Obosara
Pulse Obosara 600ps picosecond laser igwe
OEM/ODM Ọkachamara agbanwere igwe na -ewepu egbugbu egbugbu laser ogologo ndụ
1064nm 532nm 755nm Q-switch Pico Nd Yag Laser maka iwepụ Tattoo
Picosecond laser tatoo mwepụ mma igwe pico igwe abụọ ama ama na -enweghị mgbu pico kọfị tụrụ mwepụ picosecond laser